SIDA LOO QABTO XAMAAM YARI: 6 SIYAABOOD OO WANAAGSAN OO LAGU HAYO SHIMBIRAHA - BEERAHA DIGAAGA
Ku qaado qoollo leh dabeecado kala duwan
Nadaafadku waxay ka tirsan yihiin dad dhaqameedyada ah oo degan magaalooyin badan oo dadku ku badan yihiin. Waannu la kulannaa maalin kasta, laakiin dad badan maahan inay go'aansadaan in shimbirkani yahay xayawaan.
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo shimbirahan ah, laakiin shimbirta dhabta ah ayaa noqonaysa xayawaan dhab ah oo gaar ah.
Si kastaba ha ahaatee, tan waa in marka hore laga soo qaado shuruudaha duurjoogta ah, taas oo ah had iyo jeer ma aha shaqo fudud. Qodobkani waxaan ku baran doonaa siyaabaha ugu waxtarka leh ee si ammaan ah loo qaadi karo xayawaanka duurjoogta ah, iyo sidoo kale tixgelinta sifooyinka ugu muhiimsan ee haysashada maxaabiista.
Dabeecadda iyo dabeecadaha shimbirta
Xamuubyadu waxay ka midyihiin mid ka mid ah nabarrada ugu caansan oo degan dhammaan dadyowga shimbiraha ah ee caalimadeena ah, taas oo ah sababta ay ugu hibeeyeen nin baahida kala duwan ee qoysaska taniyo wakhtiyadii hore.
Duurjoogta, xamaamku waxay doorbidaan inay hoggaamiyaan habka lo'da ee nolosha, isku ururinta waqti isku mid ah adhiga tiro badan, tirinta dhowr qof oo daraasad ah. Tani waxay ka caawisaa inay iyaga difaacdo dhammaan noocyada kala duwan ee suntan, iyo sidoo kale inay si guul leh u helaan cunto.
Ma taqaanaa? Shimbiruhu waa mid ka mid ah naadiga ugu caansan ee dhulkeenna. Shimbirahan waxay si guul leh ugu noolaadaan dhammaan qaaradaha, marka laga reebo Antarctica.
Shimbirahaasi waxay leeyihiin dareen qoyan oo heer sare ah. Galka adhiga, shimbiraha ayaa inta badan loo qaybiyaa laba-labo-jira kuwaas oo jira nolosha oo dhan. Waxay leeyihiin dareen waalid oo si wacan u horumarsan, sidaa darteed carruurtoodu waxay ku hoos jiraan daryeelka waalidiinta si ay u dhamaystiraan xornimada, iyo haddii ay dhacdo halis ah naadiga nabadgelyo-doonka ah si fudud ayaa u dhaqaajin kara qof kasta oo isku dayaya in uu waxyeeleeyo dhallinyarada. Dhakhaatiir badan oo farsamoyaqaan ah ayaa sidoo kale kala soocaya xamaamyada leh baaxad weyn oo bani-aadmi ah.
Soo ogow meesha aad ka arki karto chickens choves, cudurada aad ka heli kartaa qoorgooyo, sida loo ogaado jinsiga ee xamaam, waxa ay tahay rajada nool ee qooleyda ee duurka iyo guriga.
Hase yeeshee, inkastoo xaqiiqda ah in ay raalli ka yihiin qof si toos ah uga soo qaata gacmahooda, si fududna ula xiriiraan shimbiraha, shimbiruhu mar waliba aad ayey u taxaddaraan - khatarta ugu yaryar waxay u duulaan meeshii ugu fiicneyd, ugana baxaan ugxanta ugu badan ee shimbirta magaalada ka badan
Sida loo qabto xamaam yari: hababka kalluumeysiga
Wax qarsoodi ah maaha in qof kasta oo ku nool magaalo uu ka fikiray siyaabaha suurtagalka ah ee loo qaado xamaamadda. Sababta tani waxay noqon kartaa wax badan - iskuday in ay ku caawiso dadka dhaawaca ah si ay u soo qabtaan banaanbax ka soo jeeda canbaareyn balaaran oo balalkooda u gaar ah. Laakiin inta badan isku day kasta oo ay ku qaadaan shimbiraha ayaa ka careysiiya guuldaro, maaddaama qaar badan oo naga mid ah aan haysan xirfadihii ugama maarmaanka ah. Marka xigta, waxaan tixgelineynaa siyaabaha ugu muhiimsan si ammaan ah loo qabsado dadka deggan magaalooyinkaas.
Ma taqaanaa? Qarnigii 17aad ee Boqortooyada Ingiriisku, xayawaankii hore ayaa loo adeegsaday warshad militari. Waxay ka sameeyeen noocyo kala duwan oo walxaha qarxa.
Qaadista xamaamyada leh gacmo furan waa mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan uguna yar yar ee lagu helo shimadda dheer ee la sugayo. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrintan - hubso inaad soo saarto waqti xadidan, sabir iyo bacad yar oo cunto ah shimbiraha (noocyada kala duwan ee miraha ama hadhuudhka si aad uga doorato). Intaa waxaa dheer, waa inaadan ku kalsoonayn kalluumeysiga, markaa waa in aad marka hore barato agility, haddii kale ma arki doontid wax shimbir ah oo ku jira qafiskaaga.
Sidaa darteed, si aad xayawaanka ugu qabato gacmahaaga qaawan, waxaad u baahan tahay:
Raadi adhiga yaryar ee shimbiraha ah isla markaana u dhowow sida ugu dhow ee suurtogalka ah.
Dhab ahaan, dhaqdhaqaaq lama filaan ah, waxaad u baahan tahay inaad ku daadiso qadar yar oo cunto ah oo kugu hareereysan si aad u ururiso tirada ugu badan ee dadka gaajeysan. Ka digtoonow meerkuna waa u qalantaa, shimbiruhu waa inay ku muujiyaan kalsooni.
Ka dib markaad quudiso, waxaad u baahan tahay in aad qaadato qadar yar oo miraha ah oo timirta ah, fadhiiso oo si tartiib ah ugu foorarsado shimbiraha gaajada.
Waa muhiim! Goolku waa inuu ahaadaa mid xoog leh, xoog leh, laakiin leh qufac shimbireed ee jirka shimbiraha, haddii kale waxaa jira feejignaan sare oo keenaya waxyeello.
Sida ugu dhakhsaha badan shaqsiyaadka dhowrka ah waxay bilaabaan in ay jimicsadaan waqti isku mid ah cuntada timirta ah, waxaad u baahan tahay inaad si aad ah u gaarto mid ka mid ah oo ay qabato jirka.
Video: sida qashinka loo qabsado gacmahaaga
Sanduuqa ama sanduuqa
Sanduuq joogto ah ama sanduuq waa mid ka mid ah aaladaha habboon ee ay kufaraxeen hilibka berrinka ee muddo ka badan toban sano. Tani waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna bini-aadanka ah ee lagu qaado xamaam, laakiin badanaa waxay u baahan tahay waqti badan iyo madaar diimeed.
Raadi aragtida hilibka ugu caansan iyo kuwa xamaameysan.
Si aad u diyaariso dabin sanduuqa, waxaad u baahan doontaa:
sanduuq ama sanduuq ku haboon;
dhar alwaax ah oo leh dherer ah 15-20 cm;
xarig kalluumeysi xoog leh ama xadhig xadhig ah;
buur yar yar oo quudiya (hadhuudh ama miraha gabbaldayaha).
Si aad u qaaddo xayawaan adiga oo isticmaalaya dabin dibadda sanduuqa ayaa lagama maarmaan u ah sidan:
Waa inay kudhowaan xayawaanka caleemaha.
Ku dhowaad shimbiraha, sanduuq waa in lagu dhajiyaa ciidda si ay hoos ugu taala top iyo qaybta sare waxay ku haboon tahay dusha ciidda.
Next to the stick sticker waxaad u baahan tahay inaad ku soo lifaaqdo mid ka mid ah cidhifyada line ama thread nayl.
Ka dib markaa, waxaad u baahan tahay inaad kor u qaaddo mid ka mid ah labada dhinac ee sanduuqa si ay u soo horjeeda u dhowaato dhulka, isla markaana hagaajiso dhismaha leh ul alwaax.
Dhirta soo baxda, hubi inaad ku shubto qadar yar oo ah quudinta qadada, ka dibna ka fariisto masaafada ugu dheer.
Ka dib markii mid ka mid ah xamaamku xiisaynayo qashinka oo ku dhex yaal dabinka, waxaad u baahan tahay inaad si adag u jiido dharka. Shimbirta dheer ee la sugayo ayaa la qabtaa.
Mabda 'aasaasiga ah ee kalluumeysiga loo yaqaan' loop 'waa mid la mid ah sida ugaarsiga shimbiraha iyadoo la isticmaalayo god dabiici ah, laakiin wali waxay leedahay kala duwanaansho. Si aad u qabsato shimbir dabool leh, waxaad u baahan tahay khad kaluumaad oo qaro weyn leh iyo cunto yar yar (sida qadhaadh), iyo sidoo kale dulqaad badan.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan sida si haboon iyo si ammaan ah u niyad-jebinaya xamaamadda balakoonka.
Nidaamku wuxuu ka kooban yahay tallaabooyinka soo socda:
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad hesho adhiga roodhida oo aad ugu dhowaato.
Qeyb ka mid ah xariiqda waxaad u baahan tahay inaad xirto qalab isdabamarin oo si fudud loo rakibo dhulka.
Ku rid cuntada cuntada ah ee bacda dhexe ee wareegga wareegga, ka dibna u dhaqaaq inta ugu badan suurtagal ka soo dabka.
Marka xayrkuna waa labalaabboodba meesha dhexe ee wareegga, waxaad u baahan tahay inaad si adag u jiido geeska ka soo horjeeda ee kalluumeysiga si loo wareego si adag loo xirxiray hareeraha mid ka mid ah addimada shimbirta.
Xayawaanka lagu xiray wareegga waa in si taxadar leh loo jiido naftooda, la sii daayo oo loo wareejiyo qafis loogu talagalay gaadiidka xiga.
Muuqaalka muuqaalka kiniisadaha ee daaqadaha guryaha magaalooyinka maanta waa maalin shaqo. Marka aad raadineyso cunto, shimbirahan waxay inta badan u duulaan meel u dhow guriga, gaar ahaan xiliga qaboobaha. Qaadida shimbir toos ah oo ka soo baxa xayawaanka daaqa ma fududa, laakiin suurtagal maaha.
Si tan loo sameeyo:
Ku darso qadar yar oo cunto ah daaqadda, daaqadda daaqadda iyo dabaqa qolka.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad furto daaqada oo waxaad sugto daqiiqad marka shimbirta la qaadayo raashinka qoyan ee hooseeya, ka dibna warwareeg qolka.
Marka xamaamku qolka ku yaal, waxaad u baahan tahay inaad si adag u xirto daaqada. Isla mar ahaantaana, waa in la daryeelaa si loo hubiyo in daaqadaha iyo albaabada kale ay si adag u xiran yihiin, haddii kale ma fududa in la qabsado.
Ka dib marka xayawaanka ku nool yahay gudaha gudaha, waxaad bilaabi kartaa inaad si toos ah ugu qabato gacmahaaga ama adoo adeegsanaya walxo kala duwan.
Qaadista xamaamyada leh shabaqa kalluumeysiga waxaa badanaa loo isticmaalaa kalluumeysiga massa ee shimbiraha, laakiin haddii loo baahdo, habkani wuxuu sidoo kale ka go'n karaa shakhsi. Hantida noocan oo kale ah waxay u baahan tahay heer aad u sarreeya oo garsoore ah, sidaa daraadeed waxaa loo fuliyaa labo-labo.
Waa muhiim! Qaadida digaagga leh kalluumeysiga kalluumeysiga wuxuu u baahan yahay garsoor diimeed oo culus iyo dhaqdhaqaaq jimicsi, sidaa darteed, ka hor intaanay ugaarsiga, waa in la dhawr maalmood.
Qaadashada shimbiraha leh shabaqa kalluumeysiga waxay ka kooban tahay talaabooyinka soo socda:
Sneak sida ugu dhow ee suurtagal ah in baakada qafin.
Dhulka degitaanka qareemada shimbiraha, waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah u faafiso shabaqa oo aad ku rusheyso qadar yar oo quudin ah (miraha ama hadhuudh si aad u kala doorato).
Marka xigta, mid kasta oo ka mid ah lammaanayaashu waa inay hoos u dhigaan mid ka mid ah cidhifyada shabakada oo ay sugaan xilliga muuqaalka muuqaalka noolaha.
Marka xamaamyada ay ku jiraan dabinka, waa inaad si xushmad leh u xirto cidhifyada shabakada oo si adag u adkeeyso.
Qaadi kareemo si tartiib ah uga soo jiido shabakadaha iyo in la dhigo baqashada loogu talagalay gaadiidka kale.
Nidaamka dabka qabatinka isticmaalaya shabakadaha kalluumeysiga
Soo qabashada xamaamka hurdo
Qaadashada shimbiraha hurdada ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu sahlan uguna dhaqsaha badan. Laakiin si ay ugaarsiga si dhab ah u guulaystaan, habka loo baahan yahay diyaarinta taxadar leh, waxaa lagu fuliyaa dhowr marxaladood:
Bilowga hore, waxaa lagama maarmaan ah in la garto meelaha ay ka mid yihiin adhiga habeenkii ee haadda. Waxay noqon kartaa qulqulo cufan, qolal garret ah iyo meelo kale oo bannaan.
Marka xigta waxaad ubaahan tahay inaad doorato cimilada ugu fiican ee kalluumeysiga, ugu fiican dhamaantood, haddii ay tahay habeen diiran, qalalan oo aan daruuri lahayn.
Waqtiga ugu fiicnaanta, waxaad u baahan tahay inaad si aamusan u socoto oo adigoon cidna u helin xayawaanka qoyskooda habeenkii, ka dibna gacmaha gacmaha ama gacan ku siinta shabakada kalluumeysiga si ay u soo qaadaan tirada dadka muhiimka ah ee loo baahan yahay iyo ka wareejintooda dambe ee unugyada kala duwan.
Noocyada ilaalinta xamaamadda ee maxaabiista
Ka dib markii aad ku guulaysatay in aad hesho naadiga dheer ee la sugayay, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho xaaladaha ku haboon ee dayactirka. In kasta oo xaqiiqda ah in shimbirahaas aan la qabin xaaladaha nololeed, daryeelka shimbirta waa in lagu soo dhawaado qulqulo gaar ah.
Caleemaha ka soo jeeda xaaladaha dabiiciga ah muddo dheer ayaa dareema diiqad xoog leh iyo xuriyad xorriyad, sidaas darteed, si aaney u dhicin ugu dhakhsaha badan, waa lagama maarmaan in la abuuro microclimate optimal.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh si aad u akhrido sida loo dhiso dovecote.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee ilaalinta xamaamadda ee maxaabiista:
Gundhigga Mawduuca. Dabeecad ahaan, noocyada xayawaanka duurjoogta ah iyo kuwa xayawaanka ah labadaba waa kuwa xayawaan leh oo aad u jilicsan oo kor u qaadaaya, sidaas awgeed shimbir shimbir ah waa in lagu hayaa geeska ugu xasilan, oo ka fog sanqadhaha adag iyo kuwa kale ee xajiya. Guri gaar ah waxaa ugu wanaagsan in shimbiraha laga dhigo daaqada oo leh daaqad yar oo la arko.
Cabbirka unugga. Si loo ilaaliyo xamaamyada, baqashada ballaaran oo ballaaran ayaa loo isticmaalaa, siinaya shimbir leh meel bannaan ah ugu yaraan 0.5-1 mitir oo laba jibbaaran. Isla mar ahaantaana, waa lagama maarmaan in la daryeelo meel dheeraad ah oo loogu talagalay xayawaanka si ay ugu socdaan meel ka baxsan qafiska, haddii kale waxay si dhab ah u xanuunsan kartaa.
Heerkulka heerkulka. Shimbirahaasi waxay ka mid yihiin xayawaanka degan ee u dulqaadanaya isbeddel deg-deg ah ee heerkulka, si ay u dareemaan inay si fiican u dareemaan isbeddelada -30 ° C ilaa +30 ° C Si kastaba ha ahaatee, heerkulka ugu fiican ee qajaarka ah waa celceliska maalin walba heerkulka +20 ° C Heerkulka hoose ee xaaladaha hawlaha hoos u dhaca, shimbirta ayaa xiri kara cawska, si fiican, iyo kulaylka xad-dhaafka ah si xun u saameeya hawsha habka neefsiga.
Waraaqaha biyaha iyo quudinta. Qeyb kasta waa in la siiyaa biyo la cabbo biyo nadiif ah iyo quudin quudin leh cunto cusub. Biyaha iyo quudinta waa in la beddelaa maalin kasta, haddii kale waxaa la joogaa cunnadii hore ee biyaha iyo biyaha oo keeni karta cuduro kala duwan.
Waxaan ku talinaynaa in la akhriyo oo ku saabsan sida loo sameeyo feeder ah ee xamaamka, iyo sidoo kale sida loo si habboon quudinta qoolley iyo xamaam.
Quudinta Waxay quudiyaan shimbirta saddex jeer maalintii. Xilliga xagaaga, ari, miro, iyo shaandhada kale ayaa loo isticmaalaa tan, xilliga qaboobaha, qamadiga ama hadhuudhka. Iyadoo aan loo eegin xilli, xayawaanka cuntadu waa in lagu dhajiyo khudaarta cusub iyo cagaarka.
Nadaafadda Hadafyada nadaafadeed, hoose ee qafiska waa in la dhigaa sariir caws, caws ama dhadday ugu yaraan 6 cm qaro ah maalin kasta, sariirta ayaa loo beddelayaa si cusub si looga fogaado joogitaanka saxarada. 1-2 jeer toddobaadkii waa lagama maarmaan in la sameeyo nadiifinta guud ee unugyada iyadoo la adeegsanayo nadiifinta walxaha, iyo sidoo kale ka hortagga jeermiska. Si aad tan u sameyso, isticmaal xal soodhiyam kiciyum ah (2%), saliid (4%), chloramine (1%), gogol (1%), paraform (2%), chlorocresol (2%), limeeyaha biyaha lagu qiyaaso (3%) ama saliid (4%).
Waa muhiim! Iyada oo kaydka raashinka, shimbirta waa in aan la bixin; wakhtiga cuntada ee xigta, quudiyaha ku jira qafiska waa inay ahaadaan kuwo madhan. Haddii kale, waxay u horseedi kartaa horumarinta cudurrada kala duwan ee unugyada.
Xamaaradda waa shimbir xariif ah oo khibrad leh, waxay leedahay dabeecad deggan iyo dabeecad, iyo sidoo kale daacadnimo run ah oo labadeeda ah. Inkasta oo uu saaxiibtinimo iyo kalsooni buuxda oo qofkasta ah, marwalba wuu heegan yahay, sidaas darteed waa in la ilaaliyaa ilaaliyeha.
VIDEO: Maqaarka Kabaha Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho boodh duurjoog ah weli suurtagal ah. Si taas loo sameeyo, hubi inaad sarayso dulqaad, dulqaad iyo xirfad lagama maarmaan ah.